Jiro inground ingroun, underwarter ary maritrano mpanamboatra jiro LED - Eurborn
Jiro rindrina ML1021
GL112H ao anaty
GL116 ao anaty
GL150 ao anaty
GL166 ao anaty
Lahatsary ho an'ny fametrahana amin'ny hazavana LED ambany
Kalitao avo sy avo lenta.
Eurborn no mpanamboatra sinoa tokana natokana ho an'ny fikarohana, ny fampandrosoana ary ny famokarana jiro anaty tany ambanin'ny tany sy jiro anaty rano. Tsy toy ny mpamatsy hafa izay manao karazana jiro marobe, tsy maintsy mifantoka foana isika noho ny tontolo iainana izay manohitra ny vokatra. Ny vokatray dia tsy maintsy afaka mandray ireo fepetra ireo ary mahavita tsara na inona na inona olana. Noho izany dia tsy maintsy manao ny ezaka rehetra izahay amin'ny dingana tsirairay mba hiantohana ny vokatra entinay hanomezana fahafaham-po anao
PROJECTS vao tsy ela
Jiro tohatra misy hateviny 12mm fotsiny -GL108
Miaraka amin'ny fomba feno sy siantifika fitantanana avo lenta, avo lenta ary mino tsara dia nahazo laza tsara izahay. Mandritra izany fotoana izany dia manantitrantitra ny fanavaozana mitohy i Eurborn, ary mampahafantatra an'io hazavana io amin'ny lamosina farany ambany indrindra any Eurborn ...
Karazan-jiro tohatra 4
1. Raha tsy natao ho an'ny fahafinaretana dia tsy misy tsirony ny andrin-jiro Raha ny marina, ny jiro tohatra dia mety mitovy amin'ny jiro amin'ny lalana. Izy io no jiro voalohany amin'ny tantara ampiasaina ho endrika famolavolana fisainana, satria ny tohatra amin'ny alina dia tsy maintsy misy jiro, o ...
Azonao atao ny mifandray aminay eto